Version 0.2.9 – Rajeenayo cayayaan
July 21, 2009 by dalabyo Leave a Comment
Maalmihii la soo dhaafay ayaa la isticmaalay si uu u xaliyo cayayaanka qaar ka mid ah ay soo sheegeen dadka isticmaala naga. Credits buuxda waxaa lagu bixiyey log isbedelka. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo qof la warbixinta cayayaanka noo maxaa yeelay waxa ay naga caawisaa hagaajiyo software this qof walba.
Waxaan sidoo kale ku raaxaysan aad taageerto oo ay isku dayayaan inay ka baxaan ma dhagaxyo qasaariyo si ay kuu caawiyaan, si xor ah u nala soo xiriir, iyo haddii aan jawaabay waqti macquul ah – kaliya mar kale nala soo xiriir!
Waxaan sidoo kale la waydiiyay ku saabsan deeqaha (todobaadkii laba jeer this). Sidaas hore – markan aqbali mayno wax deeqo lacag (inkastoo aan mahad ujeedooyinka aad) laakiin waxa aannu samayn aqbalo ah noocyo kale oo dhowr ah oo deeqo. Nagu deeqay markii diraya wararka cayayaanka (iyo xitaa ka fiican, patches 😉 ) , aqoonta ku saabsan plugin this wax qoraal ah ee blogs ama forums jecel aad, codeeyaan plugin this ee buugga tusaha WordPress Plugin si dad badan u isticmaali doonaa oo ugu dambeyntii – waxaad had iyo jeer nagu caawin kartaa adigoo iyo tarjumida this site hooyada-carrabkiina.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: bugfix, deeqo, yaryar, sii daayo, plugin wordpress